Dzakakosha edhisheni dzenhau pfupi neHama Grimm naHans Christian Andersen | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Fantasy, Mabhuku, Vechidiki Mabhuku, Nyaya
Ivo vanga vari chipo chevanasekuru vangu, asi zvinoita sekunge kwandiri kuti vanozovaverenga kana vakura uye voziva kuverenga zviri nani. Zvichakadaro, maiguru vake, vanova ini, vakatofara nazvo edhisheni dzakakosha dzedzakanyanya ngano neHama Grimm naHans Christian Andersen. Kunakidzwa kwandinowana.
Iyi miunganidzwa miviri inosanganisira yakasarudzika sarudzo ye Nhoroondo mifananidzo nevanyori kubva kuma20s kusvika kuma50. Pakati pavo - kubva kunozivikanwa uye nomukurumbira Kay nielsen kunyange british Walter Crane, achipfuura Harry Clarke, Heinrich Strub, Herbert Leupin kana Lotte Reininger, piyona wecinematographic animation.
Zvakadaro here yakagadzirirwa vaverengi veese mazera uye pakutanga kweumwe neumwe pane kuongorora kwakazara kwazvo kubva mupepeti, Noel daniel, pahupenyu nemabasa eGrimms naAndersen. Uye ivo vanogona kunge vangatariswewo mabhuku eumhizha.
Jakob naWilheim Grimm ivo vaiva Vadzidzi veGerman uye vanodzidza mitauro uyo akapedza makore achiunganidza ngano dzakakurumbira uye dzimwe ngano dzevanhu senge Cinderella, Chando Chena y Rapunzel. Mhedzisiro yacho yaipfuura 200 nyaya, Imwe yeiyo kuunganidzwa kwenyaya dzinozivikanwa kwazvo pasi rose, (Zvinonzi pamberi payo panongova neBhaibheri chete). Kufuridzira uye kurudziro muzvizvarwa zvakapfuura uye zvinotevera zvevanyori, vaimbi, maartist, uye vagadziri vemafirimu vanogona zvisingaperi.
Ngano dzakabatanidzwa mukusarudzwa: Iyo Frog King kana Henry iyo Iron, Raponchigo, Hänsel naGretel, The Brave Little Tailor, Cinderella, Mai Holle, Little Red Riding Hood, Kurara Runako, Snow White, Iyo Jumping Dwarf, Starfall, Puss muBhutsu, Iyo Goose yegoridhe. , madzimambo gumi nemaviri anotamba.
Ehe zviripo mafirimu anoenderana zvichibva pane vese hama Grimm naAndersen. Pane achangopfuura, Chakavanzika cheHama Grimm, ivo Terry gilliam (2005), iine Heath Ledger naMat Damon, iyo yakashandura nyaya yake kuita ngano semashiripiti uye nerima senge mune dzake ngano.
«Upenyu pachahwo ndicho chinoshamisa kwazvo ngano»Ndiyo imwe yemitsara yezvingaitika munyori weDanish anozivikanwa kwazvo wenguva dzese. Andersen akaberekerwa mu Odense, muna 1805. Kubva kuzvininipisa mavambo uye wega hunhu, munguva pfupi yakatanga kufunga kukuru. Aive zvakare nyanduri uye mutambi wemitambo.
Ngano dzakabatanidzwa mukusarudzwa: Mambokadzi nePea, The Nightingale, Mudiki Mermaid, Hembe dzaMambo dzekare, Murwi weTin, Mambokadzi weSinou, Hwakashata Duckling, Iyo Tinder Yakareruka..
Mafirimu ake anoyeukwa zvakanyanya angave Iyo yakanaka Andersen, naCharles Vidor (1952), inyimbo naDanny Kaye uyo akatamba munyori weDenmark mune imwe yeaya maitiro uye mabhaisikopo ayo kana iwe ukamuona achiri mwana, haukanganwe. Iyo haisi biography, asi ngano chaiyo pamusoro paAndersen uye yaive kubudirira kwenyika dzese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Edzimba dzakakosha dzenhau pfupi neHama Grimm naHans Christian Andersen
Ingrid ojeda akadaro
Pindura Ingrid Ojeda
Pamwe mune chero chitoro chemabhuku kana paInternet. Kana pane webhusaiti yaTaschen, hongu.
Mabhuku angu matatu ekuverenga mukudonha